Ukutya okuThambileyo-Kukuphi ukutya okutyayo kwaye kungenako? | Ukutya kukaNutri
Ukuba ukhe weva nge ukutya okungenangqondo, Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba ayisiyiyo isicwangciso sokulahla ubunzima uthotho kilos njengoko kusenzeka nezinye iintlobo zokutya ezinje ukutya kwe-Atkins okanye iPerrone. Ukuba unomdla kuyo kwaye ufuna ukwazi ngakumbi malunga nokutya okuthambileyo, ndiza kuchaza yonke into Into omele uyazi malunga nayo, ukuba iqulathe ntoni kwaye ngoobani abantu ukuba mabayilandele.
1 Kukuthini ukutya okuthambileyo?
2 Kukuphi ukutya onokukutya kwisidlo esithambileyo?
3 Ukutya okungavumelekanga kwaye ekufuneka kuthintelwe kukutya okungafunekiyo
4 Umzekelo wemenyu ekudleni okuthambileyo
4.2 Isidlo sasemini
5 Landela ukutya okunempilo kunye nokulinganisela
6 Iingcebiso zamva nje malunga nokutya okungekho mthethweni
Ukutya okuthambileyo sisicwangciso sokutya sexesha elithile oogqirha bayalela ngaphambi kwezifo ezahlukeneyo zokwetyisa okanye emva kohlobo oluthile longenelelo lotyando. Ugqirha ukhetha olu hlobo lokutya, ukuze isiguli Ungatya ukutya ngokulula kwaye unokuhlafuna uginye ngaphandle kwengxaki. Kwiimeko ezininzi oku kutya kudla ngokulandelwa xa kugqityiwe ukutya okungamanzi kwaye isigulana sikulungele ukuginya kancinci nangokucophelela. Ukwenziwa kokutya, iya kwahluka ngokuxhomekeke kwimeko yeklinikhi yesigulana.
Kukuphi ukutya onokukutya kwisidlo esithambileyo?
Kukho inani elikhulu lokutya okufanelekileyo ithambile kwaye zilungele ukubandakanywa kolu hlobo lokutya, apho umntu alulandelayo iindleko ukuhlafuna, ukugwinya okanye ukufuna ukugaywa okungalulanga. Ezinye zokutya ezinokuba yinxalenye yokutya okuthambileyo Zizo:
Isidudu sesiriyeli njenge oatmeal okanye ingqolowa semolina.
Ipasta ephekiweyo kude kube lula nokutya lula.
Frutas ithambile kwaye ithambile Njengeebhanana ezivuthiweyo, icantaloupe, okanye ivatala.
Iziqhamo eziphekiweyo okanye ezibilisiweyo ezifana amapere okanye iiapile.
Imifuno ephekiweyo ngaphandle kolusu kwaye zinokucocwa ngokulula njengeminqathe okanye icauliflower.
Iimveliso zederi njenge yoghurt okanye itshizi esasazekileyo.
Le yimizekelo nje embalwa yokutya onako thatha ngaphandle kwengxaki umntu olandela ukutya okuthambileyo.
Ukutya okungavumelekanga kwaye ekufuneka kuthintelwe kukutya okungafunekiyo
Zininzi iindlela zokutya into ofanele uyiphephe Ngelixa ulandela olu hlobo lokutya njengoko zimbi ukuba zenziwe kakuhle okanye kunzima ukwetyisa okanye ukuhlafuna. Ukutya okungavumelekanga zezi:
Isonka kunye nembewu kunye neenkozo ezipheleleyo.
Iimbotyi ezinezikhumba eziqinileyo ezifana iinkukhu okanye iimbotyi.
Ii-apile, iipesika, okanye iinanapple.
Inyama ebomvu, inkukhu okanye ikarikuni.
Iisoseji okanye iihambhega.
Umzekelo wemenyu ekudleni okuthambileyo
Abantu abaninzi bacinga ukuba ukutya okungekho nto kunokukufumana Yiba uyadika kwaye ungqongqoNangona kunjalo, ngezantsi ndiza kukubonisa eminye imizekelo ezinye iimenyu onokonwabela ukutya okwahlukileyo kolu hlobo lokutya kunye yitya intwana yento yonke.
Amaqanda aqhuqhiwe ngeshizi egayiweyo, itshizi encibilikiweyo kunye ne-melon encinci.
Iqanda elibilisiweyo kunye iyogathi ecwengekileyo.
Ismoothie yenziwe ngobisi, ibhanana, umgubo wecocoa, iyogathi, kunye neswiti encinci okanye iswekile.
I-tuna isaladi ene mayonnaise kunye nezinye iziqholo. I-Apple ecocekileyo.
Isaladi yeqanda enemayonnaise kunye neziqholo. Isaladi seMelon.
I-ertyisi puree. Amapheya aswiti.
I-Turkey iqengqeleka nge izilayi zeavokhado.
Isaladi yePasta eneTuna.
Isalmon ebhaka kunye neebhatata.
Isipinatshi quiche kunye necauliflower puree.
Landela ukutya okunempilo kunye nokulinganisela
Kubaluleke kakhulu ukuba uyazi ukuba ukutya ukutya okuthambileyo akuhambelani nokutya ukutya kwe uhlobo olusempilweni nolulungeleleneyo apho umzimba wakho ufumana konke izondlo eziyimfuneko ukuze usebenze kakuhle ngokufanayo. Ungaphoswa amaqela okutya zibaluleke njengeziqhamo, imifuno, iimveliso zobisi okanye iisiriyeli. Emva koko ndiza kukunika uthotho lweengcebiso ukuze umzimba wakho ufumane ukutya okusempilweni:
Kuphephe ukutya ukutya kakhulu ngamaxesha onke ityebile kwiswekile, ngakumbi ezo zingenasondlo.
Faka ukutya kukutya okutyayo yemibala (luhlaza, tyheli okanye orenji) ukuqinisekisa ukutya okwaneleyo iivithamini emzimbeni wakho.
Kufuneka utye noko malunga ne-1.200 calories ngosuku. Ukuba ngemini yakho yosuku utya iikhalori ezimbalwa kunaleyo ibonisiwe apha ngasentla, eyona nto iqhelekileyo kukuba umzimba wakho qala ukuphulukana nemisipha ngendlela eqhubela phambili.
Lumka kakhulu xa kuziwa ukutyeba amafutha. Inyaniso yokuba ulandela ukutya okuthambileyo akuthethi ukuba unenkululeko yokutya zonke iintlobo zamafutha. Ukuthintela ukungafumaneki okuninzi kwamafutha, kungcono ukuba utye iimveliso zobisi ngokupheleleyo skimmed okanye skimmed kwaye usebenzise umhluzi wenyama encinci ukunika i-purees incasa engcono.
Iingcebiso zamva nje malunga nokutya okungekho mthethweni
Ukuba ngezizathu ezahlukeneyo ulandela ukutya okuthambileyo, kubaluleke kakhulu ukuba ungalahli iinkcukacha zazo izikhokelo zokutya zakutshanje okanye iingcebiso. Zama ukuhlafuna kakuhle kwaye utye kancinci, ukuze uququzelele ukwetyisa ngokusemandleni kwaye awunayo Iingxaki zesisu njengesiqhelo njengegesi ecaphukisayo. Nje ukuba ugqibile ukutya, zama ukuphumla okwemizuzu embalwa kwaye uququzelele ukwetyisa okunjalo.
Eyona nto icetyiswayo kukugcina ukutya okuthambileyo ngexesha malunga neentsuku ezi-3 0 4 emva koko uye kancinci okanye kancinci wazise ezinye iintlobo zokutya ukufezekisa ukutya okuqhelekileyo onokutya kuzo zonke iintlobo izondlo eziyimfuneko kunye neevithamini umzimba wakho. Ukuba uqaphela ukuba emva kwale mihla, usenengxaki xa utya ukutya okuthile, kuya kufuneka uye kugqirha wakho omthembileyo.
Njengoko ubonile kwaye wafunda kweli nqaku, kunokwenzeka ukwenza ukutya usempilweni, ulungelelene kwaye usisityebi Nokuba utya ukutya okuthambileyo. Ukulandela uthotho lwezikhokelo kunye ubuchule obuncinci Unokwenza imenyu enomdla ekuncedayo ukuba ubuye ngokukhawuleza kwiingxaki zakho zempilo kwaye ibonelele ngezakhamzimba ezilungileyo emzimbeni wakho.
Apha ngezantsi ndikubonisa ividiyo apho yonke into iya kucaca gca kwaye kukuphi ukutya onokukubandakanya kolu hlobo lokutya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Isibonelelo sokutya » Ukutya okuthambileyo
Esi sesona sincomo sibi sokutya okuthambileyo endakha ndakufunda.
Iingcebiso zokunciphisa imithambo yevaricose kunye neetumato eziluhlaza kunye nobomvu
Tshisa amanqatha kunye neekhalori ngokuhamba